Akwụkwọ Robert Graves 3 kacha mma › June 2022
Ịgbaso akwụkwọ ahụ Osisi iri na isii nke Somme, na Larss Mytting M kpaliri ikere oke Robert Graves n'ọgụ ahụ mere na mpaghara Somme nke France, ebe ihe karịrị otu nde ndị agha nwụrụ na nke Graves n'onwe ya na -achọ ịhapụ ụwa a na -edeghị ọtụtụ akwụkwọ akụkọ.
Mana akara aka dị otu a, ọ nwere ike kaa gị mana ọ gaghị egbu gị ma ọ bụrụ na ị nwere ọrụ na -echere (ma ọ bụ ya mere anyị ga -achọ iche maka atụmatụ ọgbaghara ahụ nke ịdị adị anyị dị ka mmepeanya)
Na nke ahụ kpọmkwem, nke mepere anya maara ma dee ọtụtụ ihe ọma Robert Graves. Nagide nsogbu nke itinye aka na Agha Worldwa Mbụ na mgbe ọ tụgharịrị n'akwụkwọ ka ọ bụrụ ọgwụgwọ nwere ike ịgwọ ọrịa obi, onye edemede a chọtara nnukwu ihe kpatara mmepeanya oge ochie iji dee akwụkwọ akụkọ ihe mere eme nke nwere nnukwu mkpa.
Akụkọ kacha dịpụrụ adịpụ na -agagharị n'etiti akụkọ ifo na ihe akaebe edere edere nke na -anwa ijikọ ọnụ dị ka ihe mgbagwoju anya nwere ihe ọ pụtara.
Mgbe ahụ, akwụkwọ na -abịa, na -ejikọ akụkụ ahụ niile n'ụzọ anwansi, na -esonye n'echiche na akwụkwọ nke ihe nkiri nke ndị ekwetere na -emegharị kwekọrọ na omenala na omenala ekpughere n'abalị nke oge ahụ.
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ onye edemede dị oke mkpa ịghọta ihe nna nna anyị nke ime obodo chere na echiche banyere mbara ụwa nke amabeghị na ọrụ ya na nnukwu ya.
Akwụkwọ akụkọ 3 kacha mma Robert Graves
Nwanyị na-acha ọcha
N'ime nnukwu akwụkwọ akụkọ a, onye ode akwụkwọ hapụrụ akụkụ buru ibu nke akara ya, nke ebumnuche ya ibi n'ime akụkọ nke ya, na nsonaazụ nke ntụkwasị obi anwansi dị ka mech
N'otu oge ahụ ọ na -arụtụ aka n'echiche na -akpaghasị echiche banyere nkwenkwe nke mbụ Western History, nke amụrụ na Gris site n'aka ndị na -eche echiche na ndị ọkà mmụta sayensị mara mma. Ili na -ewetara anyị akwụkwọ akụkọ a ọrụ ụmụ nwanyị dị iche na nke ugbu a. Tupu ọnụ ọgụgụ nke chi akụkọ ifo na ụmụ okpukpe ha ewere onyinyo nwoke dị ka onye nnọchianya nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ chi ọ bụla, a pụrụ iwere nwanyị na a ga -efe ya ofufe.
Ụdị nna ochie n'ezie lekwasịrị anya n'ikike imepụta ndụ. Ihe ili na -agwa anyị n'ime akwụkwọ akụkọ a mepere echiche ọhụrụ na ụwa nke malitere dị ka ezigbo nna ochie, ikekwe ruo mgbe Eva ghọrọ mmadụ nwere ike imebi Chineke ...
Zụrụ ya ugbua
Ili na -akpọ anyị oku ka anyị chee na anyị nwere akụkọ ndụ Claudio. Atụmatụ dị oke egwu nke na -adịchaghị ka nke ukwuu mgbe achọpụtara nnukwu ihe ọmụma nke onye ode akwụkwọ nke yiri ka ọ chọpụtara na akụkọ ndụ onwe ya na mbibi Rome dịpụrụ adịpụ.
Na, iji mee ihe ziri ezi, Claudio kwesịrị ide ya niile, ọ bụghị naanị akụkụ nke ọchịchị kamakwa ụdị ikike na ike dị iche iche yana omume ọjọọ nke ọha ọ bụla mepere emepe na -anya isi ozugbo emere ya.
Site na ọgbụgba ama Claudio a anyị na -abanyekwa n'oge Caligula gara aga ma ọ bụ ụdị ndụ Claudio nke atọ, Messalina na -enye nsogbu. N'ikpeazụ, akụkọ ọhụrụ na -atọ ụtọ banyere Rome alaeze ukwu, yana ụda akụkọ ndụ nkwupụta ebe anyị na -abịaru nso na ihe niile metụtara ike ...
Ọlaedo ọla edo
Robert Graves nyere anyị n'akwụkwọ akụkọ a echiche ọhụrụ na akụkọ ifo ndị Gris. Ọmụma sara mbara nke akụkọ na ihe odide nke ụbọchị ndị ahụ nyere ya ohere idegharị akụkọ ifo ochie nke ajị anụ ọlaedo nke Jason na Argonauts jiri mee njem maka mmeri ha na ya wee weghachi ocheeze Thessaly n'aka Jason.
N'ime ndezigharị a, anyị na -abịarukwa nso na ọtụtụ mkpụrụedemede ndị ọzọ nke nnukwu echiche efu ahụ bụ akụkọ ifo ndị Gris nwere ọtụtụ echiche ụwa niile. Anyị so Hercules, Orpheus, Castor gafee Oké Osimiri Ojii.
Anyị na -enwe ọmarịcha mmụọ nke ndị Gris mbụ, otu ahụ ga -emepụta ihe West bụ taa. Adventures na ịbịaru mmalite anyị, ọrụ na -atọ ụtọ nke ukwuu ịbịaru akụkọ ifo ndị Gris site na prism ọhụrụ zuru oke nke na -agwakọta mmadụ, chi na oghere nke ndị mmụọ ma ọ bụ dike.
Tags Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, Robert Graves